Mareykanka Oo Tababar u soo Gaba Gabeeyay Ciidamo Danab ka Tirsan (SAWIRRO) | Bakool.net
Home / WARARKA DALKA / Mareykanka Oo Tababar u soo Gaba Gabeeyay Ciidamo Danab ka Tirsan (SAWIRRO)
Mareykanka Oo Tababar u soo Gaba Gabeeyay Ciidamo Danab ka Tirsan (SAWIRRO)
Dowladda Mareykanka ayaa Magaalada Muqdisho waxa ay tababar ugu soo xirtay askar ka tirsan ciidamada Danab ee sida gaarka ah loo tababaro, kuwaasi oo fuliya weerarada qorsheysan.
Saldhiga ugu wayn ee Ciidamada Danab lagu tababaro, ayaa wuxuu ku yaalla Garoonka Diyaaradaha Ballidoogle ee Gobolka Shabellaha hoose, hayeeshe ciidankaan ayaa intii uu tababarka u socday, waxa ay ku qaadanayeen Xerada Xalane oo Saraakiisha Mareykanka ay joogaan.
31 askari oo ka tirsan ciidamada Danab ayaa tababarkan la siiyay, iyadoo loo dhameystiray saanad ciidan ee askari u baahan yahay, waxaana taasi sii dheer in askartan la siiyay gaadiid ay ku hawlgalaan.
Ciidamada Danab oo ah ciidan juhdi badan lagu bixiyo tababarkooda, ayaa ciidamada kale ee dowladda waxa ay dheer yihiin fulinta weerarada sida tooska ah loogu daato deegaanada ay gacanta ku hayaan Shabaab.
Saraakiisha Mareykanka ah ee tababarka u sameeyay Ciidanka Danab, waxaa ay ka tirsan yihiin guutada 10-aad ee Buuraha oo uu fadhigoodu yahay, Drum, New York.
Ciidamadan ayaa la baray sida loogu dagaallamo dhulka, Gaadiidka iyo sida loo maareeyo caqabadaha dhinaca dagaalka iyo sahayda.
Chris Smith, oo ah Sarkaalka madaxda ka ah tababarka Ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in tababarka Danab ay ka billaabeen halka ugu hooseysa, sidoo kalena dhageysteen Ciidanka Danab waxa ay doonayaan.
Waxaa uu xusay in ay sameyn doonaan dhoollatus wixii la soo baray ah, waxaana uu sheegay in ay si wanaagsan uga soo baxeen.
Cris Smith, ayaa sheegay in tababarka iyo qalabeynta Ciidanka Danab ee Soomaaliya ay dowladda Mareykanka ku bixisay lacag dhan $6.5 Milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Previous: Dowladda Somalia Oo Sheegtay ciidamo Boolis in la Gaynaayo Stadio Muqdisho..
Next: Xabi Alonso oo shaqo cusub ka bilaabi doono kooxdiisii hore ee Real Madrid